August 2015 - Page 46 of 46 - iftineducation.com
Qasaaraha Jacaylka Iyon Guurka Xawilaada Ah.
aadan21 / August 1, 2015
iftineducation.com – Guur xawilaad ah waa dhaqan ku cusub gayiga Soomaaliya, waxaana taariiq ahaan uu barigii hore yaraa ayaa aad u soo batay bartamihii sagaashameeyadii. Guurkan oo ah in nin dibada qurbaha ku nool uu soo dalbado haweeney kunool Soomaaliya ama haweeynay ay soo codsato wiil jooga Sooomaliyaa ayaa leh faa’iidooyin aan badneyn iyo qasaarooyin aan la soo koobi karin Guur…
iftineducation.com – Waa nooc ka mid ah foorarka naagaha, naagta waxay dhiganaysaa jilbaha dhulka caloosheedana hoos ayay u dhigaysaa dabadeedana kor ayay u taagaysaa, cambarkeeda gadaal ayuu ka soo muuqanayaa si fiicanna wuu u soo baxayaa, naagaha qaarkooda baryahooda ayaa soo dheer nin bahalkiisa yar yahay ma wada galin karo, labada bari ayaa ku celinayso, dumarka qaar iyagoo buuran haddana futadooda…
iftineducation.com – 1- Ha xumeyn xaaskaaga. Xumeyn aad naagtaada xumeeysaa nooc ay ahaataba, waxay ku reebtaa aano iyo murugo aan weligeed ka bixin. Waxyaabaha ay xaasku ka carooto laabteedana aanay kaaga cafineyn, xitaa hadday carrabkeeda kaaga cafiso, waxa ugu daran adigoo dila iyo adigoo caaya ama ceebeyn u geeysta iyada ama ehelkeeda, amaba adigoo sharafteeda iyo karaamadeeda wax ka sheega. 2-…
Hadii Aad Sidaan Ugu Raaxayeso Xaaskaaga Waligaa Maku iLowBeyso Hana Iloobin In Aad…(Digniin Ha Akhrisan Hadii Aadan Xaasle Aheyn).
iftineducation.com – Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay (Pink Iyo Brown-ka) in ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha ,balse waxaa qalad ah in goobahas la kiciyo ka hor inta aan la soo bisleyn jirka intiisa kale . Iyadoo la eegayo aqoonta ama fanka galmada saaxiib waxaa lagaaga baahan yahay in…
Si fiican u dhegeyso xaaskaaga, kuna .. .
iftineducation.com – Si fiican u dhegeyso xaaskaaga, kuna dhiirrigeli inay kuu sheegto wax kasta oo laabteeda ku jira. Iska jir inaad ku jeesjeestid ama hadalkeeda jebisid (beenisid). Waxa jira dumar aan hadal daayin oo deriska iyo dadka xanta. Haddaba, kuwaas oo kale si xikmad leh, diintana waafaqsan arrinkooda ku daawee.
Gabar Wadaad ah Oo Sirta Nolosha iyo Raaxada ka sheekeynaysa -Video
Xilliga Galmada Iyo Cida Ku Haboon In Ay Kormarto Ka Ogow Halkaan daawo
iftineducation.com – Dumarka qaarkood ayaa jecel in raga oo kadul maraan si oo u gaaro gariirka galmada isla markaa ay istaanbtaab Timaha hoose waxayna qaarkood jecelyihin in ay ku dul niikiyaan wallow ay durbadii ay garaan. Qaar kood ayaa kusheegaya waxa ay u door bidayaan ay tahe xiliyada ay soo dhow dahay biyaha aan fiirin karin ragooda sidaa ogeydna isugu duubaan…
Heesta Astaanta qaranka ee Kenya oo Afsoomaali laga dhigay
iftineducation.com – Dhallinayro Soomaali ah ayaa waxa ay heesta astaanta qaran ee Kenya waxa ay u badaleen afsoomaali markii ugu horeysay tani iyo markii dalkan uu xuriyaddiisa ka qaaday Britain. Dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegayaan inay arrintan isu soo dhaweyso dadka Soomaalida ah iyo qowmiyadaha kale ee Kenya. Caruurta dalkan oo dhan ayaa astaanta qaranka waxaa la baraa ayadoo Sawaaxili ama…